သင်၏စာဖတ်ပရိသတ်တိုးချဲ့ခြင်း Martech Zone
သင်ဟာကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်ဂါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ဘလော့ဂ်ရဲ့တိုးတက်မှုအကြောင်းအရင်းတစ်ခုကသင့်ဘလော့ဂ်တည်ရှိနေတာကိုသတိမပြုမိတဲ့စာဖတ်သူအသစ်များထံရောက်ရှိနိုင်ခြင်းအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ငါနည်းစနစ်အတော်များများမှတဆင့်ဤသို့ပြု ... သူတို့ကအရေးပါမှု၏နိုင်ရန်အတွက်:
အခြားဘလော့ဂ်များတွင်မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ သူတို့ကိုငါမှတဆင့်ရှာပါ Google ကသတိပေးချက်, Google ပေါ်မှာ Blogsearchနှင့် Technorati.
ငါထုတ်ဝေသည် ငါ့ RSS feed အခြားဆိုဒ်များအပါအဝင်ငါတတ်နိုင်သမျှများစွာသောဆိုဒ်များပေါ်တွင် နှင့် လူမှုရေး ကွန်ရက်များ.
ငါတတ်နိုင်သမျှ web 2.0 ဆိုဒ်တိုင်းကိုစာရင်းသွင်းပြီးငါ့ဘလော့ဂ်လိပ်စာနှင့် RSS feed လိပ်စာကိုကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းတွင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်လူနေအောင်သေချာအောင်လုပ်သည်။
ငါအသုံးချ တွစ်တာအတွက်အလိုအလျောက်အသိပေးချက်အင်္ဂါရပ်များ (ငါယခင်ကထုတ်ဝေ post ကို resave လျှင်စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းကြားစာင်ပေမယ့်) ။
ကျွန်တော်ပြောမှာပါ ဒေသဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်နိုင်ရင်
ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့လိပ်စာထုတ်ပေးပါ အလုပ်လိပ်စာကဒ် ငါဆုံတွေ့သူတိုင်း
ငါအခမဲ့ plugins ကိုထုတ်ချပြီးအားဖြင့် blogosphere နှင့်ထောက်ခံပါတယ် tools တွေ ရှေးရှေးသုံးစွဲဖို့သည်။
နောက်ဆုံးငါလုပ်အားပေး posts ည့်သည်ရေးသားချက်များရေးပါ ဘယ်အချိန်မှာကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လျော်ကြေးပေးရမလည်းဆိုတော့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကြီးတစ်ခုအတွက်တောင်းခံတဲ့အခါငါဘယ်တော့မှမငြင်းဘူး!
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်အားဆက်သွယ်ခဲ့သည် ပါရမီတိရစ္ဆာန်ရုံ Social site နှင့် Marketing အတွက်လစဉ်ကော်လံတစ်ခုကို၎င်းတို့၏ site အတွက်ရေးရန်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုက Talent Zoo သည်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ထမ်းရှာဖွေစုဆောင်းရေးအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်လူသိများလာသည်။ သူတို့ရဲ့စကားများ:
dot-com သည် dot-bomb ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ TalentZoo.com သည်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ယခုအခါ၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများသည်အတွေ့အကြုံအသစ်များမှပညာရှင်များအထိကိုယ်ရေးရာဇဝင် ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အွန်လိုင်းဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်ရှာဖွေသူများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် TalentZoo.com သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းများ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များနှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြော်ငြာတင်ဘုတ်များ၌မဖြစ်မနေဖတ်ရမည့်အကြောင်းအရာများထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပထမဆောင်းပါးကိုဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ဝေသင့်သည်။ ငါဆောင်းပါး၏လက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်နေပါတယ် (အရောင်းအဝယ်: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အလိုအလျောက်ဖို့အခုအချိန်မှာပေါက်ကွဲကြောင်းသစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း / နည်းပညာ) ။ ငါလည်း Talent Zoo မှတစ်ဆင့်ပရိသတ်အသစ်ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သေချာသည်မှာစာဖတ်သူအချို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်။
စီးပွားရေး“ ကတ်” အသစ်များဤတွင်ရှိနေသည်။
သြဂုတ် 12, 2008 မှာ 7: 58 AM
သင်၏စာရင်းကိုစစ်ဆေးရန်စာရင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်နံပါတ် ၁-၄ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ #s 1-4 တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်! အကြံပေးချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Doug ။
12:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 49
ဂရိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ အကြံပေးချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နံပါတ် (၃) သည်အချိန်ကုန်သက်သာပြီး၊ နံပါတ် (၇) ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သော်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးနှင့်အတူတက်လာရန်ရှိသည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။
သြဂုတ် 15, 2008 မှာ 11: 02 AM
ငါပြည်နယ်တဝိုက်အပတ်စဉ်သတင်းစာများ 8 အပါအဝင်အော့ဖ်လိုင်းထုတ်ဝေအများအပြားထုတ်ဝေရန်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ဖတ်ရှုခြင်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အလုံးစုံစာဖတ်သူကိုတိုးပွားစေသည် (အပတ်စဉ် ၃၀,၀၀၀ ကျော်) ။